SUNx Malta inotangisa Climate Shamwari Kufamba kuenda kuZero chirongwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Malta Kuputsa Nhau » SUNx Malta inotangisa Climate Shamwari Kufamba kuenda kuZero chirongwa
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Investments • Malta Kuputsa Nhau • nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Akasiyana Nhau
PaZuva Rezvemamiriro ekunze, SUNx Malta yakazivisa yayo Climate Friendly Kufamba kuenda kuZero mureza, wakabatana neUN Race kuZero.
Kurova dambudziko remamiriro ekunze kuri kuzoda kuzadzikisa tarisiro ye2050 yeZero Greenhouse Gasi (GHG) padiki kwazvo.
Kutsigira Zero Greenhouse Gesi 2050 chinangwa chakanangana zvakananga neUN Paris 1.5 chinangwa.
SUNx Malta ichashanda nemakambani nenharaunda kuvabatsira kusimudzira kusimudzira uye zvirongwa zvemamiriro ekunze kuti vawane Absolute Zero GHG.
Zvichienderana nesainzi yazvino, a 2050 chinangwa cheZero Greenhouse Gasi (GHG) ndiwo mashoma pakupedzisira inodiwa kurova iripo Climate Dambudziko. Nekukurudzira a Zero GHG 2050 tarisiro inotora iyo yakananga mutsara kune iyo UN Paris 1.5 chinangwa. Kutanga izvozvi.
Zvisinei, kuziva mambure kabhoni kwazvakarerekera zvakajairika nhasi, mukati meZUVAx Malta Mamiriro ekunze Anoshamwaridzana Kufamba kuenda kuZero framework, ichashanda nemakambani nenharaunda kuburikidza neayo CFT Rejista uye kuburikidza Makasimba Mamiriro ekunze, kuvabatsira kuti vagadzirise Sustainability uye Climate Plans iyo inoshandura nekufamba kwenguva kubva kuNet Zero Carbon kuenda kune Absolute Zero GHG.
Muzvinafundo Geoffrey Lipman vakati: “Sayenzi inotiudza kuti tave kuda kusvika 1.2o kwakanangana nezvinangwa zveParis Chibvumirano nhasi uye vari kunanga kune 3-5o kuwedzera ne2050. Iyo ingave njodzi iripo, nemamiriro ekunze akanyanyisa anotungamira mukuwedzera moto, mafashama, kusanaya kwemvura, uye vapoteri vemamiriro ekunze.
"PaZUVAx Malta, tiri kutora nzvimbo yepamusoro mukutsigira sainzi. Tinotenda zvakasimba kuti Climate Friendly Travel (CFT) - Low Carbon: SDG yakabatana: Paris 1.5o, ndiyo nzira yakanakisa yeTravel & Tourism yekukwira UN 2030/2050 Roadmap yeramangwana rakachena uye rakachena revana vedu. Munyori Mukuru weUN, Antonio Guterres akadaidzira kuti Tourism yese yapashure pekupararira ive yakagadzikana uye Inonzwisisika Yemamiriro ekunze. CFT inobatsira kununura izvo.